Mini Sandblaster, Qalabka Buuxinta Ciida, Mashiinada Qarxa - Nadiif Degdeg ah
Dufcaddii sare Sandblaster Golaha Wasiirada Mini Sand Blaster ...
Golaha sare sandblast golaha sare
Mashiinka Dhammaystirka Foosto 30L 60L 80 ...
Hand qabtay Sandblasting Gun Portable Pneumatic A ...
Anti-miridhku Protection Air Sp ...
2021 nooca cusub ee durbaanka otomaatiga ah ee sandblasting ...
Mach sandb efe ...
Suunka xamuulka qaada Qalab Toos ah oo Ciida Qalabka ...
Suunka gawaarida gawaarida iyo qarxinta ...
Balaastik Mass Dhammaystirka Dhirbaxaya Nadiifinta Warbaahinta
Caaga Mass dhameysteen Debu ...
B4C Venturi Boron Carbide Nozzles oo aan caadi ahayn Threa ...
Waxyaabaha uu ...
Mashiinnada tumbler ee gariirka leh oo dabool leh
Tumbiraha gariirka leh ee xiisaha leh ...
Custom Biyaha Sand-engeeg Machine Wheel engeeg
Tungsten Carbide Sandblast biiyaha Cadaadis Sare ...
Nooca nuugista mashiinka engeeg ciid qalalan oo leh ...
Nooca nuugista sandblasti qalalan ...
Koofiyada Sandblast oo leh shaandheeye Heerkulka
Kombaresarada Air degreasing f ...
Biyaha xaaqin Mashiinka culus ee ciida culeyska culus ...
Lagu dabaqay qolka ...
Mashiinka Dahaarka Budada Electrostatic
Mashiinka buufinta Electrostatic ...
Qoryaha la qaadan karo ee la qaadan karo 90psi Sma lagu hagaajin karo ...
Faahfaahinta: siz Product
Hangzhou Shunjie Makiinado Teknolojiyad Co., Ltd waa (Waagii hore Hangzhou Huashengtong Mashiinka Qalabka co., LTD.)
waa wax soo saar xirfad leh iyo iibinta mashiinka qarxa, mashiinka engeeg toogashada, mashiinka fiiqista toogashada, qolka qaraxa,
qarxinaya aaladda wasakhda ah iyo qalabka kale ee lagu daaweeyo dusha sare ee ganacsiga gaarka loo leeyahay, taageerida iibinta tooska ah ee dhammaan noocyada qalabka dayactirka, sahayda si fudud u dhaawacan;
Isla mar ahaantaana inta badan macaamiisha taageeraya inay bixiyaan alaabooyin taxane ah oo kombaresarada hawada kombiyuutarro tayo sare leh oo gudaha iyo shisheeye ah.
Wax soo saarkayaga waxaa loo dhoofiyaa in ka badan toban dal iyo gobollo ka tirsan Bariga Dhexe, Australia, Kanada, Ruushka, Yurub iyo Mareykanka.
Junjie oo u hoggaansamaya "fikradda hal-abuurka ah, raacdada heer sare, hagaajinta degdegga ah, maareynta waarta" falsafadda ganacsiga; Iyo "tayada ayaa ah shaqada ugu horeysa",
qanacsanaanta macaamilku waa sharafteenna ”siyaasaddeena tayada joogtada ah; Si loo daryeelo deegaanka, bulshada ugu laabo,
daryeelka shaqaalaha iyo masuuliyadaha kale ee bulsheed iyaga u gaar ah; Qaadashada "daacadnimada, mas'uuliyadda, hal-abuurnimada, kooxda" sida baacsigayaga iyo himiladayada joogtada ah, waxaan rajeyneynaa inaan ku siino alaab iyo adeegyo tayo leh!
Inta badan waxaa loo isticmaalaa maraakiibta, qaabdhismeedka birta ah, weelasha, gawaarida, qaybaha gawaarida, boolal, qalabyada kala duwan ee qalabka, marmar, shaabad, xardho dhagax, waardiye, balaastig, madarad, muraayad,
dhoobada iyo jiiniska la xoqin karo iyo warshadaha kale, waxaan leenahay naqshad xirfadeed, wax soo saar, rakibo iyo dhisme iyo adeeg dhameystiran iibka kadib.
Waxyaabaha taxane Junjie ayaa maray ISO-9001: 2008 shahaadada nidaamka tayada caalamiga ah, oo uu leeyahay in ka badan 40 shatiyada,
alaabteeda waxay la jaanqaadaysaa suuqyada Yurub iyo Ameerika. Shirkaddu waxay leedahay injineernimo heer sare ah iyo shaqaale farsamo,
iyo sidoo kale kooxda injineerada dayactirka si xirfad leh u tababaran, wakhti kasta iyo meel kasta si ay u siiyaan dadka isticmaala talooyin farsamo, hagitaan rakibo,
dayactirka iyo adeegyada kale. Mashiinka qashin-qubka, qolka ciida waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa gawaarida, dharka, fiber kiimikada, daawada, cuntada,
metallurgy, military, waxyaabaha elektarooniga ah, mashiinada, qalabka dhismaha iyo ilaalinta deegaanka iyo warshadaha kale.
Mashiinka Sandblast otomaatiga ah ee marmarka engeeg, dhalada, saxanka birta, saxanka birta
1.Tani mashiinka ah ee mashiinka loogu talagalay nooca gudbinta otomaatigga ah ee mashiinka sandblasting, xawaaraha gudbinta inta jeer ee la heli karo oo lagu beddeli karo xakamaynta dhijitaalka xawaaraha, tayada wax soo saarku waa mid deggan, hawlgal fudud. 2. Qalabka shaqada ku dhaji suunka xamuulka inta lagu jiro hawlgalka, iyo sandblasti ...
Sannadka Cusub ee Shiinaha 2021
Febaraayo / 02/2021
Waxaan heli doonnaa fasax dheer laga bilaabo 5-ta Febraayo ilaa 18-keeda. Wax alaab ah ma geyn doonno inta ka horaysa, laakiin wali waxaan ku soo jawaabi karnaa emayl waqtigiisu yahay Waxaan jeclaan lahaa Macaamiisheena cusub iyo kuwii hore inay caafimaad qabaan. 2021
Mashiinka Sandblasting Water ayaa laga dhoofiyaa Australia
Waxyaabaha birta ahama ee biraha Mashiinka qashin-qubka Biyaha ee bamka fiican 2.5KW, iyo koronto-u-habeynta 415V Muraayada hore ee masaxda qoryaha xirfadeed ee xirfadleyda ah Baakad ku samee sanduuqa Plywooden
Cadaadis sare Wasakhda qarxinta ciidda leh dheriga cadaadiska
Diisambar / 28/2020
Front Back Mashiinka sandblasting ee sanduuqa cadaadiska lagu saaray ee ay amartay shirkadda ku taxan Jiaxing ayaa la keenay. Mashiinka ciida-saare ee cadaadiska sare wuxuu ka kooban yahay aruuriyaha boodhka shaandhada iyo haanta cadaadiska. Waxay u baahan tahay in lagu qalabeeyo ai ...
Mabda'a iyo Qoondaynta Furimaha gariirka (1)
Noofambar / 21/2020
Shayga wax-qabadka: Mashiinnada wax lagu shiido ee gariirka waxaa loo isticmaalaa baaskiiladaha, qaybaha aluminium dhinta-tuurista, qaybaha tuubada u dhinta zinc, qalabka guryaha, qalabka dharka, qalabka shandadaha, qalabka muraayadaha, saacadaha iyo qalabka saacadaha, qufulka, qalabka elektarooniga ah, dhammaan noocyada dahabka, dahabka, budada ...